Izinyathelo zokuqala zephrojekthi: imizuzu eyi-10 ngeDesdeLinux | Kusuka kuLinux
Amaminithi ayi-10 aneLinux iphrojekthi ehlose ukusondeza abasebenzisi abasha kuyo I-GNU / Linux ngendlela emnandi futhi isivele iyakheka, ngakho-ke ngizokwazisa ngesikwenzile.
1 Iwebhusayithi Mockup
2 Ukungabaza, Iziphakamiso, Imibono
Sifuna ukwethula isiza sale phrojekthi entsha, kepha angikwazi ukuchaza ukuthi yibuphi ubuchwepheshe engizobusebenzisa. Ngangihlale ngicabanga WordPress, kepha mhlawumbe uma sisebenzisa lokhu CMS asizisebenzisi ngokunenzuzo zonke izinzuzo zalo.
Singasebenzisa enye i-CMS, elula noma senze okuthile Zoqala phansi, noma le nketho yokugcina iye ekugcineni kolayini.
Isayithi esifuna ukulisebenzisa alinzima neze, lizosebenza ukuxhumanisa amavidiyo akamuva alayishwe esiteshini sethu ku- YouTube. Ngikukhombisa ngaphezulu noma kancane umbono enginawo:
Uma unokuthile okusengqondweni ongakusiza ungalayisha okuthile ku- GitHub ngakho-ke sonke singasebenzisana.
Into ebaluleke kakhulu ngalesi siza, kungaba yi-CMS noma enye into, ukuthi kufanele kube khona ukukhiqiza okuqukethwe kalula, okungukuthi, ukuxhumanisa ividiyo noma ukufaka isithombe akufanele kube yinto ebucayi.
Ukungabaza, Iziphakamiso, Imibono
Noma yimuphi umbono onawo, isiphakamiso noma ukungabaza, ungadluliselwa nge-akhawunti yethu esemthethweni ku Twitter: @ 10inFromLinux noma, ngesikhala esenzelwe yona ngokukhethekile ku- Inkundla yethu.
Kwividiyo yesingeniso engicishe ngiyilungele, ngizonikeza imininingwane ethile mayelana nephrojekthi futhi ngicacise ukungabaza abanye abasebenzisi abake baba nakho mayelana nale phrojekthi. 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » KusukaLinux » Izinyathelo zokuqala zephrojekthi: imizuzu eyi-10 ngeDesdeLinux
Sengivele ngifuna ukubona leyo vidiyo yokusetha iseva nge-apache, i-PHP5 neMariaDB
Lokho kuphethe i-KZKG ^ Gaara 😀
Nah, iseva ene-Nginx + php5 + MariaDB
Muhle kanjani lo mklamo ... nsuku zonke ngijabule kakhulu ukuthola le bhulogi.
Ngikholwa ukuthi into elula yanele, awudingi okuningi.
Ukwenza konke kancane ngokuzenzakalela, ungasebenzisa i-YouTube API ukuthola uhlu lwamavidiyo.
Yebo, bengicabanga ngalokho, ikakhulukazi ukukhombisa isithombe sevidiyo okukhulunywa ngayo, kepha kufanele ngizicwilise kulezi zinkinga.
Iphuzu liku ukuthi Alawulwa kanjani amavidiyo kusayithi? Ngamanye amagama, bathola kanjani?
Ngingakwazi ukunakekela i-API ngaphezulu noma ngaphansi. Ngizobona ukuthi i-API iyakuvumela yini ukulayishwa kwamavidiyo.
Ukuphela kwento engisebenza nayo yilokho engikwaziyo nge-PHP, ngizobona ukuthi ngingenza yini into elula njengesibonelo
I-YouTube ine-API yedatha ekuvumela ukuthi ulayishe amavidiyo, ngalokhu ungakhiqiza iwebhusayithi lapho kukhona abasebenzisi futhi bonke bangalayisha la mavidiyo esiteshini, futhi ngaleyo ndlela baphathe lolu hlelo olusha sengathi luyi-blog, kukodwa luyiVidiyo Ibhulogi.
Banalo vele usizo lwami kulezi zinkinga.
Angazi noma icishiwe // Kepha ungabona i-wiki, njenge-dokuwiki (ukukhetha ifomethi ye-url kahle), uma inhloso ukukhiqiza ulwazi, kuzoba namandla amakhulu, abasebenzisi bangaziguqula ngokukhululeka, futhi kuhlale kukhona ukuhlehlisa, umlando wokushintsha (uhlukile) futhi mhlawumbe awusebenzisi amathani we-cpu.
Ungenza okuthile ngokwezifiso ngeSymfony noma iRuby On Rails, uma udinga usizo ngalokhu ngingunjiniyela wewebhu futhi ngingabambisana nomphakathi 🙂
Njengoba ngishilo kokuthunyelwe, ungalayisha noma imuphi umqondo ku-GitHub noma kwenye indawo lapho sonke singabona ukuthi wenzani futhi sisebenzisane .. Siyabonga ngokufuna ukusiza.
Ngingakwenza okuthile namuhla ngeRoR 🙂
umklamo uzoba nawo uphelele? i-imeyili yami yi- abimex [at] gmail.co
Ditto ... Ngisuka eSf2 ngiya eRor, noma yini engingabambisana nayo ngilapha ukuzosiza!
Kuhle, ngilangazelela ukubona lawo mavidiyo.
Inhlanhla nakho konke nenhlanhla!
haha ngingathanda kepha nginekhasi le-elkernel ngemuva kwami ​​futhi angikwazanga ukuthuthuka kunoma yini -.-
Kubukeka kukuhle, ngokusho kwekhasi. Wenza kanjani amavidiyo abe nokuhambisana kwe-HTML5?
Ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle! Vele uqaphele ikhwalithi yamavidiyo, isichazamazwi sokuthi ngubani owenzayo, njll Ngamafuphi, ukuthi amavidiyo akhombisa ikhwalithi yale bhulogi!
Yebo, kuyinto enzima kakhulu ngoba asizona izintatheli noma abasakazi be-TV, kodwa sizobona ukuthi kwenzekani 😉
Kubukeka sengathi bakha i-desdelinuxLandia xD, sine-desdelinux, okungaba yiLabhulali / iphephandaba lephepha i-xD, isithangami, esisebenza njengeSibhedlela (lapho wephula lonke uhlelo lwe-xD futhi udinga usizo lwe-xD) kanye ne-cyber cafe, the bar Bahlanganaphi izidakwa (?) jhahaha ukuze baxoxe ngeLinux (i-xD microkernel) futhi manje kungaba yini i… Cinema?, umtapo wolwazi wevidiyo?, i-flash efundisayo? xD haha
Abantu abaningi bendawo, ngoba hhayi sonke esingaya eHavana futhi sixoxe ngqo no @elav noma @gaara.
Kwesinye isikhathi ubukeka sengathi i-xD µkernel enkulu ayiyona ngqo iphrojekthi evela ku-Linux, yiphrojekthi eyenziwe ngamalungu asebenzayo okungenye into, nokuthi sengibe seqenjini iminyaka, kuhle, kuqinisa kuphela isibopho kepha ikakhulukazi, hhayi i-ex ernkernel.desdelinux. i-XD yenetha
Yize kufanele ngikhulume nendoda enempandla
Angiyena umuntu okhohlakele we-xD, ngiyazi ukuthi ngamaphrojekthi azimele, kepha awanakuhlangana kuDesdeLinuxLandia? I-xD hahaha, bayasakazana 😀
I-mockup engikusikisela ukuthi uzame ukuyenza eDrupal (eJoomla inzima impela futhi i-WordPress ayikuvumeli ukuthi uhlele ama-plugins ayo noma ayihambile impela maqondana nezinto zokuhlela ku-HTML5)
Ukuhlanganisa "i-videoblog" kubonakala kuyinkimbinkimbi kakhulu, ikakhulukazi ngenxa yezindleko zomkhawulokudonsa nezeseva.
Kodwa-ke, kungenzeka "ukukhohlisa" i-YouTube ukuze abasebenzisi abaningi balayishe amavidiyo abo esiteshini sethu, belandela imiyalo ekule vidiyo: http://www.youtube.com/watch?v=d1Hv-ShTne8
Umqondo ngokuyisisekelo ukuvumela ithuba lokulayisha amavidiyo ngokuwathumela nge-imeyili ekhelini (lapho isihloko se-imeyili sizoba isihloko sevidiyo futhi umbhalo ube yincazelo yawo). Kulula kanjalo. Ukuphela kwento ephikisana nale ndlela ugaxekile. Kuhlala njalo kukhona iparsley efuna ukuthumela udoti, kepha futhi singayisusa ngokushesha lapho othile eyibona. Noma kunjalo ... ngicabanga ukuthi le ndlela ehlanganiswe nokuthunyelwe kwebhulogi lendabuko ingasebenza kangcono kune- "videoblog".
Noma ngijabule ngalo mbono, asinazo izinsiza zokwenza into efana naleyo… 🙁
Ngivumelana nawe ! uneseva ekwazi ukusingatha ukulayisha amavidiyo ufff .. kubiza kakhulu ..
Ngicabanga ukuthi kungaba ngumqondo omuhle ukuthi umsebenzisi alayishe isixhumanisi se-YouTube sevidiyo ngefomu bese kuthi nge-PHP sikhiphe idatha kuleyo vidiyo ukuyikhombisa ekhasini lethu.
Futhi ungenza uhlelo lokulinganisa noma lokushaya amagoli lapho umphakathi uqobo "ungaklomelisa" amavidiyo amahle ... futhi "ujezise" amavidiyo kadoti ...
Uma ngikhuluma iqiniso angiqondi okuncane abakushoyo (ulwazi lwami mayelana nezinsizakalo zeWebhu cishe alukho i-xD), kodwa ngijabule kakhulu ukuthi le projekthi isiqediwe, ngicabanga ukuthi kuzoba yisiphambeko kimi ukubuka lawa mavidiyo.
Sawubona ngiza ukuphawula ukuthi iLinux Kernel 3.11 isivele ikhishiwe:
Ukubingelela nebhulogi enhle.
Ukubona nje lokho kukhishwa kungenza ngifise ngempela ukuthi ifike 🙂
Ngikwenza lokhu nge-ruby kojantshi, 😛
UToño G kusho
Ngiyafa ukubona le vidiyo lapho ivela khona ku-linux.net inginika i-core core i5 8gram entsha lapho ngifaka khona i-debian ngokuba ngumlandeli omuhle webhulogi .. .. futhi ngiqonde ukuthi
Phendula uToño G
Kuhle, ngithanda ukubamba iqhaza (yize ngingenalo ulwazi lokuthi ngizokhuluma ngani).
Njengoba iLinux iya ngokuya iba nkulu.
Ngidinga ukwenza ngcono izwi lami ukuze ngizizwe ngiwumuntu wonke we-Linux consoler xD